नेट तटस्थता भनेको के हो? | Martech Zone
नेट तटस्थता भनेको के हो?
शनिबार, मार्च 10, 2007 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
म ठूलो व्यवसायको प्रशंसक हुँ र म डूम डे थ्योरिस्ट भन्दा धेरै होइन; यद्यपि नेट तटस्थता मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा ठूलो छ। मेरो सम्पूर्ण जीवन र मेरा बच्चाहरूलाई समर्थन गर्ने क्षमता इन्टरनेट प्रयोग गर्ने मेरो कार्यको क्षमता, इन्टरनेट प्रयोग गर्ने मेरो क्षमतामा निर्भर गर्दछ ... र यो द्रुत रूपमा मेरा बच्चाहरू बनिरहेको छ '। छिटो र ढिलो लेनहरूको साथ इन्टरनेटको डिसींगले विकल्प प्रदान गर्दैन, यसले वास्तवमै ढिलो लेनहरू गाड्दछ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो क्षमता, ब्ल्गरहरू र साना व्यवसाय उद्यमीहरूको रूपमा, अदृष्य हुन्छ।
मलाई विश्वास छ कि यसले कम आर्थिक बृद्धि गर्नेछ र अन्तत: हाम्रो अर्थव्यवस्थामा चोट पुर्‍याउनेछ र यसको फलस्वरूप कर राजस्वलाई पनि असर पार्नेछ। यो एकदम डरलाग्दो परिदृश्य हो र सम्पत्ति र शक्तिको सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्नेछ जुन इन्टर्नेटले सानो आवाजमा ल्याउँछ - र यसलाई पैसा भएकाहरूको हातमा फिर्ता राख्छ - जसरी यो अखबार, संगीत, रेडियो र टेलिभिजनसँग भयो।
तपाईले वास्तवमा चीजहरू ठीक गर्न काम गर्नु हुँदैन जुन केवल भाँचिएको छैन ... तर हामी बसिरहेको विश्व परिवर्तन गर्दैछौं र दिनको हरेक दोस्रोमा नयाँ अर्थव्यवस्था र व्यवसाय खोल्दैछौं।
यहाँ केहि विडंबना पनि छ। व्यवसायहरू जस्तै Akamai व्यवसायहरूमा पहिले नै नेटमा उनीहरूको सामग्री वितरण वितरण गर्न 'छिटो' गर्न मद्दत गर्दछ:
अकमई एजप्लैटफर्ममा लगातार the१ देशहरुमा 20,000०,००० सर्भरहरु खटाइएको छ जसले निरन्तर इन्टरनेट निगरानी गर्छन्? ट्राफिक, समस्या स्पटहरू र समग्र सर्तहरू। हामी ती जानकारीहरूको उपयोग बौद्धिक रूपमा रुट अप्टिमाइज गर्न र द्रुत, थप विश्वसनीय डेलिभरीको लागि सामग्रीको नक्कल गर्न प्रयोग गर्दछौं। जस्तो कि आज Akamai ले कुल इन्टरनेट ट्राफिकको २०% ह्यान्डल गर्दछ, हाम्रो इन्टरनेटको दृश्य कतै जम्मा भएका सबै भन्दा व्यापक र गतिशील छ।
हामीले भर्खर अकमईलाई हाम्रो काममा प्रयोग गर्न सुरु गरेका थियौं र यो विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो अनुप्रयोगको प्रतिक्रियामा डबल-अंक सुधार भएको छ ... केहि स्थानहरूमा %०% सम्म। यो हो, पाठ्यक्रम, साना व्यवसायहरूलाई सस्तो नभएको; यद्यपि यो आफैमा व्यवसाय हो। त्यसोभए मात्र हामीलाई यी नयाँ 'फास्ट लेनहरू' आवश्यक छैन, हामीसँग पहिले नै समाधान छ जुन द्रुत सामग्री वितरणमा ठूलो व्यवसायलाई सहयोग गर्दछ। त्यसोभए हामी किन अझै यसको बारेमा कुरा गर्दैछौं?
याचिकामा हस्ताक्षर गर्नुहोस् र दान गर्नुहोस् इन्टरनेट बचत गर्नुहोस्.
ब्लगिging त्रिकोण: सफलताको3तत्वहरू
मार्स 10, 2007 मा 11: 06 एएम
म अझै पनि नेट तटस्थता वास्तवमा के हो भनेर अन्योलमा छु। के तपाईं अस्पष्ट जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
मार्स 10, 2007 मा 11: 18 एएम
इन्टरनेटको मुख्य मार्गहरू भएका मानिसहरूले ट्राफिकको लागि दुईवटा मार्गहरू सिर्जना गर्न चाहन्छन्। एउटा बाटो (अहिले जस्तो छ) सामान्य इन्टरनेट रूटिङ हुनेछ। अर्को बाटो; यद्यपि, ग्राहकहरूलाई भुक्तान गर्नका लागि टेलिकमहरूले छिटो, राम्रो ब्यान्डविथको लागि चार्ज गर्न सक्ने बाटो हुन सक्छ।
यसको पछाडिको विचार यो हो कि वैध व्यवसायहरूले तपाइँ वा मलाई उनीहरूको सामग्रीको सुधारिएको डेलिभरीको लागि भुक्तान गर्न सक्छन्। यस तरिकाले तिनीहरूले अवस्थित ट्राफिक मार्फत ट्राफिक प्राप्त गर्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। यदि तपाईंले उदाहरणका लागि गुगललाई हिट गर्नुभयो भने, र तिनीहरूले बढेको ब्यान्डविथको लागि भुक्तान गर्दैछन्, तिनीहरूको वेबसाइट धेरै छिटो लोड गर्न सक्षम हुनेछ।
कागजमा, यो राम्रो सुनिन्छ। यद्यपि, परिणाम प्राय: विनाशकारी हुनेछ। तपाइँ र मेरो लागि इन्टरनेटको समग्र प्रदर्शन र पूर्वाधार सुधार गर्न यी कम्पनीहरूलाई कुनै प्रोत्साहन हुनेछैन। वास्तवमा, एकदम विपरीत सत्य हुनेछ। यदि तिनीहरूले इन्टरनेटको 'सामान्य' मार्गहरूलाई कार्यसम्पादनमा गिरावट दिनुभयो भने, यसले 'व्यापार' मार्गहरूको लागि थप व्यवसायलाई आकर्षित गर्नेछ।
हाल, यदि Verizon वा AT&T वा Comcast ले तिनीहरूको नेटवर्क र ब्यान्डविथ सुधार गर्दछ, सबैलाई सुधार देख्छ । नेट न्युट्रलिटीमा त्यो 'न्युट्रल' हो। म जस्तो मान्छेहरु यसलाई यस्तै राख्न चाहन्छन्। यदि यी केटाहरूले छिटो, राम्रो नेटवर्क निर्माण गरे जसमा तपाईंले तिर्नु पर्छ, तपाईं र म व्यापारबाट बाहिर हुनेछौं। मानिसहरूले हाम्रो साइटहरूमा आउन परेशान गर्दैनन् किनभने यो धेरै ढिलो हुनेछ।
मेरो चिन्ताको मूल यो हो कि, यद्यपि यी कम्पनीहरूले इन्टरनेटमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् - तिनीहरूले यसलाई सिर्जना गरेका छैनन्। यो अमेरिकी करदाताको पैसा थियो जसले इन्टरनेटलाई जमिनबाट हटाइदियो... हामी पछि पर्नु हुँदैन!
मार्स 10, 2007 मा 11: 21 एएम
के यो अमेरिकाको लागि विशिष्ट हो वा सबैतिर केहि। तर, मलाई लाग्छ कि हामी मध्ये अधिकांश गैर-अमेरिकी नागरिकहरूले अमेरिकामा होस्ट गरिएका साइटहरू छन्, यसले हामीलाई ठूलो असर गर्छ।
यसको बारेमा ब्लगमा जाँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद 🙂
मार्स 10, 2007 मा 11: 26 एएम
यो कहिँ पनि हुन सक्छ, तर यदि यो अमेरिकामा हुन्छ भने, प्रभावहरू पक्कै पनि बाहिर राम्रोसँग फैलिनेछन्। अन्य देशका ठूला व्यवसायहरू प्रायः ब्यान्डवागनमा पनि चढ्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि त्यो पूर्वाधार हुनेछ जसले धेरै मानिसहरूसम्म पुग्न मद्दत गर्दछ। तपाईं र म जस्ता मानिसहरूलाई केही पैसा जोगाउन वा फोहोरमा छोड्न बाध्य हुनेछ।
मार्क्स 10, 2007 मा 12: 15 PM
हो, थाहा भयो । ठिक छ, मलाई आशा छ कि तिनीहरू सफल हुनेछैनन्, जबसम्म तिनीहरूले सबैलाई "दान" गर्न व्यवस्थापन गर्दैनन्।
मार्स 13, 2007 मा 10: 11 एएम
नमस्ते डग - म ह्यान्ड्स अफ द इन्टरनेट गठबन्धनसँग काम गर्छु र तपाईंका पाठकहरूलाई हेर्न प्रोत्साहित गर्नेछु यो भिडियो नेट तटस्थता बहस र यसमा संलग्न खेलाडीहरूको राम्रो बुझाइको लागि। पनि भ्रमण गर्नुहोस् हाम्रो ब्लग थप जानकारीको लागि। धन्यवाद!